कुन स्थानीय तहमा कति छन् मतदाता र मतदान स्थल ? (सूची हेर्नुहोस्) - बडिमालिका खबर
बिहिबार, जेष्ठ ५, २०७९
कुन स्थानीय तहमा कति छन् मतदाता र मतदान स्थल ? (सूची हेर्नुहोस्)
बुधबार, बैशाख २१, २०७९
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि देशभरका स्थानीय तहमा कायम हुने मतदान स्थल र केन्द्र निर्धारण गरेको छ । सातै प्रदेशमा दश हजार ७ सय ५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९ सय ५५ वटा मतदान केन्द्र निर्धारण भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । जसअनुसार प्रदेश १ मा १८ सय ७७ मतदान स्थल हुँदा ४ हजार ५१ मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ । प्रदेश १ मा ३३ लाख ४७ हजार ३८४ मतदाता रहेका छन् ।
३३ लाख ३१ हजार १७० मतदाता रहेको मधेस प्रदेशमा २१ सय ६३ मतदानस्थल र ४ हजार १ ८९ मतदान केन्द्र रहेका छन् । देशकै राजधानी रहेको र सवैभन्दा बढी मतदाता रहेको वागमती प्रदेशमा ३४ लाख १२ हजार ८६९ मतदाता रहेका छन् । यो प्रदेशमा १७ सय ९२ वटा मतदानस्थल कायम रहेका छन् भने ४ हजार ९५ मतदान केन्द्र कायम भएको छ ।
१७ लाख ७९ हजार ४११ जना मतदाता रहेको गण्डकी प्रदेशमा १२ सय ५३ मतदान स्थल र २३ सय मतदान केन्द्रमार्फत मतदान हुने भएको छ । ३२ लाख १९ हजार ४७५ जना मतदाता रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १६ सय २९ मतदानस्थल र ३८ सय ३२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको आयोगले जनाएको छ । उता १० लाख १ हजार २८२ मतदाता रहेको कर्णालीमा ९ सय सात मतदानस्थल र १३ सय ८५ मतदान केन्द्र रहेका छन् । १६ लाख ३२ हजार १५० मतदाता रहेको सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ११ सय ३५ मतदानस्थल र २१ सय ३ मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । देशभर ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष मतदाता, १८३ अन्य र ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० महिला गरी १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता रहेका छन् ।
७५३ स्थानीय तहमा कायम मतदाता, मतदानस्थल र मतदान केन्द्र आयोगले तोकेको हो । देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७७ नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका रहेका छन् । यस्तै देशभर ६ हजार ७४३ वटा वडा रहेका छन् ।
आचारसंहिता बिपरीत वालबालिका प्रयोग, ठुला दलहरुबाट बढी उलंघन
कैलालीको अत्तरियाबाट बाजुरा आउदै गरेको बस डोटीमा दुर्घटना
सुदूरपश्चिम लोकसेवा आयोगले फेरि खोल्यो विज्ञापन
नेकपा एस बाजुराका जिल्ला सचिव रावतमाथी काँग्रेस कार्यक्रताद्धारा चक्कु प्रहार
नेपाली काँग्रेस प्रदेश (क) का क्षेत्रिय सभापति बोहरा एमालेमा प्रवेश
प्रदेश सचिब रोकाया भन्छन्, “मेरो टिकट कोल्टि पुगेपछि खोसियो”
बडीमालिका नगरपालिकामा कांग्रेस पराजयको दोष कसलाई : मेयर बडुवाल
बुढिनन्दाको पहिलो मत परिणाम सार्वजनिक, एमालेको अग्रता
बुढीनन्दा ८ मा कडा सुरक्षाका बिच निर्बाचन हुदै
खप्तड छेडेदहमा अध्यक्षमा एमाले, उपाध्यक्षमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी
बडिमालिका नगरपालिकामा एमालेकाे अग्रता निरन्तर
पराजित राेकाया एमालेकाे बिजयी जुलुसमा भएपछी‍‍‍..
बुढिनन्दाको पछिल्लाे मत परिणाम सार्बजनिक, एमालेको अग्रता कायमै
बुढिनन्दा नगरपालिका वडा न ८ मा नेकपा एमालेबाट वडा अध्यक्षका उम्मेदवार केशब शाही बिजयी
कञ्चनपुरमा फरक–फरक पार्टीबाट लडेका श्रीमान–श्रीमती विजयी
त्रिवेणीमा नगरपालिकामा प्रमुख उप प्रमुखमा काँग्रेसका उम्मेदवार विजयी
बुढिनन्दा नगरपालिका वडा न १ मा नेकपा एमालेका वडा अध्यक्ष सहितको प्यानल बिजयी
जगन्नाथमा गठबन्धनलाई हराउदै अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एमाले बिजयी
बाजुरामा उच्च सुरक्षा सतर्कता
बडीमालिका नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ मा नेकपा एमालेका थापा विजयी
बडिमालिकाको पछिल्लो मत परिणाम यस्तो रहेको छ